नेदरल्याण्ड्सका यी ५ खेलाडी : जो नेपाललाई घातक बन्न सक्छन्
By क्रिकेट पाटी	 On Apr 17, 2021
काठमाडौं- नेपाल, नेदरल्याण्ड्स र मलेसियाबीचको त्रिकोणात्मक टी-२० सिरिज आजदेखि सुरू हुँदैछ । यो सिरिज कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुनेछ ।
सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल र नेदरल्याण्ड्स खेल्दैछन् । यो सिरिजमा नेपालको लक्ष्य राम्रो क्रिकेट खेल्दै सिरिज आफ्नो पक्षमा पार्ने हुनेछ । यद्यपि, नेपाललाई सिरिज जित्न त्यति सहज हुने छैन ।
सिरिजका लागि नेपाल र नेदरल्याण्ड्सबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय मलेसिया पनि राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको भए पनि तुलानात्मक रूपमा नेपाल र नेदरल्याण्ड्सभन्दा ऊ कमजोर देखिन्छ ।
यसैबीच, आज आसन्न सिरिजमा नेपाललाई चुनौती दिन सक्ने नेदरल्याण्ड्सका ५ खेलाडीको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ :
१. पीटर सीलार : पीटर सीलार नेदरल्याण्ड्स टिमका कप्तान हुन् । उनले हालसम्म नेदरल्याण्ड्सका लागि ४१ ओडीआई र ६९ टी-२० म्याच खेलेका छन् ।
सीलार नेदरल्याण्ड्स टिमका महत्वपूर्ण सदस्य मध्येका एक हुन् । अलराउन्डरको भूमिका निर्वाह गर्ने उनले हालसम्म ६९ टी-२० को ४० इनिङ्स खेल्दा ४६४ रन बनाउनुका साथै ५३ विकेट लिएका छन् ।
टी-२० अन्तर्राष्ट्रियमा ३३ वर्षीय सीलारको उच्च प्रदर्शन अविजित ९६ रन हो । त्यस्तै, चार ओभरमा १९ रन दिएर चार विकेट लिनु उनको उच्च बलिङ प्रदर्शन हो ।
अनुभवी र टिम कप्तान भएकाले पनि सीलारले नेपाली टिमलाई चुनौती दिन सक्छन् ।
२. टोबियस भिसे : नेपाल टूरमा रहेका ब्याट्सम्यान टोबियस भिसे पनि नेदरल्याण्ड्स टोलीका अर्का महत्वपूर्ण खेलाडी हुन् ।
उनले हालसम्म नेदरल्याण्ड्सका लागि २७ टी-२० मा तीन अर्धशतकको मद्दतमा ४ सय ७८ रन बनाएका छन् ।
३० वर्षीय भिसेले ग्लोबल टी-२० लिगसमे खेलिसकेका छन् । उनी नेदरल्याण्ड्सका लागि उमेर समूहदेखि नै खेल्दै यो स्थानमा आएका हुन् ।
३. बेन कपूर : त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाललाई कडा चुनौती दिन सक्ने खेलाडीमा बेन कपूर पनि एक हुन् ।
उनले हालसम्म ५१ अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० मा १ हजार ९४ रन बनाइसकेका छन् । त्यसक्रममा उनले ७ अर्धशतक बनाएका छन् ।
बेन हाल अष्ट्रेलियामा क्रिकेट खेलिरहेका टम कपूरका भाई हुन् । टमले विगतमा नेदरल्याण्ड्सका लागि खेले भने हाल भने अष्ट्रेलियामा क्रिकेट खेलिरहेका छन् । त्यहाँ उनले विभिन्न टिमबाट बिग बास लिग (बीबीएल) पनि खेलिसकेका छन् ।
टमका भाई बेनको अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० मा उच्च स्कोर अविजित ९१ रन हो । उनले हालसम्म नेदरल्याण्ड्सका लागि ८ एकदिवसीय म्याच पनि खेलिसकेका छन् ।
४. म्याक्स ओदाउद : नेदरल्याण्ड्स टिमका महत्वपूर्ण खेलाडीमध्ये म्याक्स एक हुन् । उनले ब्याटिङबाट टिमलाई महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् ।
२७ वर्षीय म्याक्सले हालसम्म नेदरल्याण्ड्सका लागि ३६ टी-२० खेलेका छन् । जसमा उनले ६ अर्धशतकका साथ ८६६ रन बनाएका छन् ।
म्याक्स अलराउन्डर हुन् । उनले ३६ म्याचको ९ इनिङ्समा बलिङ गर्दा तीन विकेट हात पारेका छन् । म्याक्सले पनि नेपाली टिमलाई कडा चुनौती दिन सक्छन् ।
५. पउलभान बिक्रेन : नपयलभान बिक्रेन नेदरल्याण्ड्स टिमका प्रुमख हतियार मध्येका एक हुन् । उनी बलर हुन् । हालसम्म उनले ४१ टी-२० मा ६.९४ को राम्रो इकोनमीमा ४७ विकेट लिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० मा पउलको उत्कृष्ट बलिङ चार ओभरमा ११ रन दिएर चार विकेट लिनु हो । उनले ग्लोबल क्यानडा लिगसमेत खेलिसकेका छन् ।
त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्ने नेदरल्याण्ड्सको टोली : पिटर सिलार (कप्तान), टोबियस भिसे, बेन कूपर, म्याक्सओ दाउद, बासडी लि, विक्रमजीत सिंह, स्कट एडवर्ड्स, आर्यन दत्त, फिलिप बोइसेभ्यान, पलभ्यान मिक्रेन, भिभियन किंग्मा, टोनी स्टाल, सेबस्टियान ब्राट र जूलियन डिमे ।
त्रिकोणात्मक टी-२० सिरिजनेदरल्याण्ड्स क्रिकेट टिम